Faafaahin Dad Isku Qoys Ahaa Oo Lagu Laayay Degmo Ka Tirsan Gobolka Bakool | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Faafaahin Dad Isku Qoys Ahaa Oo Lagu Laayay Degmo Ka Tirsan Gobolka Bakool
Faafaahin Dad Isku Qoys Ahaa Oo Lagu Laayay Degmo Ka Tirsan Gobolka Bakool
Wararka aan ka heleyno degmada Waajid ee Gobolka Bakool ayaa waxaa la sheegayaan in halkaas habeenkii xalay aheyd uu ka dhacay weerar xoogan oo lagu qaaday Guri ay ku sugnaayeen dad isku qoys ah oo ku yaalla degmadaas.
Rag hubeysan ayaa la sheegay inay weerarkaas ku qaadeen guriga, xili ay ku sugnaayeen qoyska oo ka koobnaa Hooyo, Caruurteeda, Aabahood iyo xubno kale oo badan, isla markaana ay jiifeen markii uu weerarka dhacayay.
Dadka deegaanka oo la hadlay warbaahinta ayaa u sheegay in weerarka uu ka dhashay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo gebi ahaan soo gaaray qoyskii ku sugnaa Guriga oo ku yaalla degmada Waajid.
Ilaa iyo hadda lama oga wax ay ahaayeen ragga weerarka geystay, kuwaasi oo goobta ka baxsaday, waxaana dhacadadaas siweyn uga naxay dadka deegaanka degmada Waajid ee Gobolka Bakool ee Maamulka Koonfur Galbeedd Soomaaliya
Faafaahin Dad Isku Qoys Ahaa Oo Lagu Laayay Degmo Ka Tirsan Gobolka Bakool was last modified: November 25th, 2020 by Admin
Kiiskii ugu horeeyay oo Coronavirus ah oo laga helay magaalada Jigjiga
Maxaa ka jira in Coronavirus uu ka soo fakaday sheybaar ku yaalla Shiinaha?
Aqriso- isku aadka Tartan Aqoonedka ka socda Warsan Radio wareegiisa labaad